विप्लवको अराजनीतिक हर्कत, हिम्मत भए घोषणा गरेर युद्धमा जाउ, कायरता देखाएर आतंकित नपार
नेतामाथि आक्रमण गर्दै व्यापारी तर्साएर चन्दा उठाउने दाउ !
Friday, 17 Nov, 2017 2:55 PM
पछिल्लो समय निर्वाचनको माहोल नजिकिँदै जाँदा उमेद्वारहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै आक्रमण भइरहेका छन् । दैनिक तीनचारवटासम्म माइन विस्फोट भइरहेका छन् । हालसम्म कसैको मृत्यु भइनसकेको भएपनि आक्रमणको शैली कसैलाई तर्साउने हैन, घात लगाएर मार्ने उद्देश्यले नै आक्रमण गर्न खोजिएको देखिएको छ । पश्चिम रुकुममा माओवादी केन्द्रका उमेद्वार जनार्दन शर्मामाथि गरिएको बम आक्रमणबाट सुरु भएको यो सिलसिला रोल्पामा बर्षमान पुन, भोजपुरमा शेरधन राई, संखुवासभा, म्याग्दी, गोरखा, बागलुङ हुँदै नुवाकोटसम्म पुगेको छ । नुवाकोटमा शुक्रबार काँग्रेस उमेद्वार डा. रामशरण महतको प्रचार टोलीमाथि गरिएको आक्रमणमा त पाँच जना गम्भीर घाइते भएका छन् । यी सबै आक्रमणको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन । तर, सोझो निशाना नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि गएको छ । विप्लव नेकपाले निर्वाचन वहिष्कारको नीति लिएको छ र बहिष्कारलाई सफल बनाउने नाममा घातक आक्रमणमा उत्रिन थालेको छ ।
सशस्त्र युद्धकालमा माओवादी सेनाको राजनीतिक कमिसार बनेका नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ अति महात्वाकांक्षी नेता हुन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पछि अवसर प्राप्त गर्ने कुनै ठाउँमा जान नपाएपछि २०६५ सालदेखि नै पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरेका विप्लवले अर्को १५ हजार मानिसको मृत्यु भएपछि प्रचण्ड जस्तै नेता बन्ने महात्वाकांक्षी प्रशिक्षण दिने गरेको कुनै समय उनी निकट भएका माओवादी कार्यकर्ताहरु बताउँछन् ।
उनको महत्वाकांक्षी योजनाकै कारण माओवादी फुट्यो । वैद्य माओवादी समेत फुटालेर आफै महासचिव भएपछि विप्लवको योजना अब आफूलाई बार्गेनिङ पावरमा पुगेर काठमाडौंको सत्तासम्म आइपुग्नु हो । काठमाडौंका राजनीतिक दलहरुलाई तर्साउनकै लागि गाउँ वस्तीमा बम पड्काउने नियत विप्लवको यही महत्वाकांक्षाको परिणाम हो । विप्लवको कुनै राजनीतिक योजनामा अहिलेको हर्कत भएकै होइन । राजनीतिक योजना हुँदो हो त विप्लव नेकपाले तत्कालिन माओवादील्े राज्यसँग २०५२ फागुन १ मा घोषणा गरेर युद्ध सुरु गरे जस्तै घोषित विद्रोहमा जान्थ्यो ।
हिंसा भड्काउने, निर्वाचन बिथोल्ने, चन्दा उठाउने
न कुनै राजनीतिक एजेण्डा, नत सीधासीधा युद्धमा जाने हिम्मत र क्षमता, तर, युद्धको ध्वाँस देखाएर निर्वाचन भाँड्ने नाममा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने नियत सफा देखिदैन । अहिलेको आक्रमण र हिंसा नेकपाका नेताको बुद्धिले मात्र काम नगरेको हुनसक्छ । निर्वाचनलाई जसरी पनि सेवोटेज गरेर स्थगित गराउन चाहने शक्तिको हात समेत रहेको हुनसक्छ । किनकी, ती शक्तिहरु अहिले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नहोस भन्ने चाहेका छन्, जसले नेपालमा वामपन्थी र लोकतान्त्रि गठबन्धन बनेर पाँचवर्षे स्थिर सरकार बनोस भन्ने चाहँदैनन् ।
विप्लव नेकपाको अर्को योजना छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने जस्तै पनि हुनसक्छ । निर्वाचनको समयमा हिंसाको खेती गर्दा त्यसपछि निरन्तर उद्योगी व्यापारी माथि दवाव बढाउन सकिन्छ र चन्दा असुलीको धन्दालाई पुनः सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने पनि रहेको हुनसक्छ । अराजनीतिक हर्कत गर्दा पनि सरकारको निरिहता बढ्दै जाँदा यस्ता क्रियाकलाप गर्ने विप्लव शक्तिको मनोबल बढेको हुनुपर्छ ।
मोहन वैद्य किरणबाट छुट्टिएपछि युद्धको ध्वाँस देखाएर अर्धभूमिगत भएको घोषणा गरे विप्लवले । अर्धभूमिगत भनिए पनि खुल्लामञ्चमा भाषण गर्ने र टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन हिँड्नुले उनको अर्धभूमिगत सबैले देख्न पाएकै छन् । नाम मात्रको अर्धभूमिगत भनिएका विप्लव कलंकीको एउटा पार्टी प्यालेस छेवैको घरमा आलिसान जीवन बिताइरहेका छन् । देशैभर चन्दा आतंक तिब्र बनाएका छन् ।
युद्धको त्रास देखाएर कायरतापूर्ण आक्रमण गरी अरुलाई तर्साउने र चन्दा बटुल्ने मात्र उनहो अभियान हो भन्नेकुरा यसभन्दा अगाडि धेरै कुराले पु्ष्टि गरेका छन् । एनसेलले लाभकर नतिरेको भन्दै उसका केहीथान टावरमा आक्रमण गरिरहँदा एनसेलको माउ कम्पनी एक्जिएटासँग विप्लवको अर्बौँको डिल भइरहेको थियो । टावरमाथि आक्रमण बढेपछि एनसेलले विप्लवको मुख टालिदियो ।
अहिले न उनले एनसेलको लाभकरबारे मुख खोल्छन् न त उसको लुटतन्त्रको विरोध । चन्दा नदिएपछि डिस होमको अर्थस्टेशनमा आक्रमण भयो । डिसहोमले विप्लवको थैली भर्दिएपछि त्यो पनि सामसुम भयो । तिहारको बेला भैलो खेल्दै न खेली भैलो खेले बापतको पैसा चाहियो भन्दै भट्टीदेखि ठुला कर्पोरेट कार्यालयहरूमा पत्र पठाएको सबैलाई जगजायर नै छ ।
युद्धमा पनि नजाने, युद्धको ध्वाँस देखाएर चन्दा आतंक सिर्जना गरेको तीनवर्ष भयो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै निर्वाचनको बहिस्कार भन्ने र नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्ने, नेता कार्यकर्तालाई नै नछोड्नेले हामीलाई के छाड्ला भन्ने भ्रम पारेर उद्योगी व्यवसायीलाई त्राहिमाम पार्ने र निर्वाचनपछि थाल ठटाएर चन्दा उठाउने धन्दामा विप्लव नेकपा लागेको प्रष्ट हुन्छ । यसमा कुनै सन्देह छैन कि मोहन वैद्याबाट छुट्टिएपछि चन्दा आतंक बाहेक नेकपाको अन्य कुनै राजनीतिक एजेण्डा र राजनीतिक संस्कार देखिएको छैन ।
सके घोषित युद्ध लड
विप्लवले युद्धमा जान्छु भनेको तीनवर्ष भयो । तर उनका कार्यकर्ता राजधानी लगायत शहर बजारमा चन्दा उठाउन तल्लिन छन् । उनका केही कार्यकर्ताको पैसा उठाइदिए बापत कमिशन खाने सहमतिमा अपहरण गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरा त न्यूजसेवाले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
युद्धको समयमा भए सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्नुलाई स्वभाविक ठानिन्थ्यो र त्यो अवस्थामा राज्यले पनि एउटा घोषित नीति लिन्थ्यो होला । राज्यले पनि कि त उनीहरुका माग पुरा गथ्र्यो, या त प्रत्याक्रमणमा उत्रेर सिध्याउने नीति लिन्थ्यो होला । विप्लवकै पार्टीले समेत विजयी बनेर विप्लव राष्ट्रकै कार्यकारी प्रमुख पनि हुनसक्थे होला । तर, अहिले न कुनै आधारभुत माग, न त कुनै धरातलीय राजनीतिक एजेण्डा । चन्दाका लागि मात्र गरिएका यी सबै प्रपन्चलाई अराजनीतिक हर्कत र अपराधिक क्रियाकलाप बाहेक अरू केही मान्न सकिँदैन । हिम्मत छ भने युद्धमा गएर राज्यसँग लडेर आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउनु पर्छ, होइन भने यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
एकपछि अर्को उमेद्वारमाथि आक्रमण भइरहँदा सरकारको निरिहता प्रष्ट देखिएको छ । सुरूमा वाम गठबन्धनमाथि देखिएको आक्रमण पछिल्ला दिनमा सत्तासिन दलकै हेवीवेटमाथि भइरहेका छन् । तर पनि सरकारी सुरक्षा हर्कत बढेको छैन । केही दर्जन कार्यकर्तालाई हिरासतमा लिने बाहेक अरू कुनै कदम चाल्न सकेको छैन राज्यले । राज्य निरिह र कमजोर हुँदा उद्दण्डहरुको मनोवल बढ्छ भन्ने पुष्टि हो विप्लवको पछिल्लो गतिविधि । अति गरे खति हुन्छ भनेझैँ सरकारको निरिहता यस्तै रहने र उमेद्वारमाथिको आक्रमण बढ्दै जाने हो भने चुनावमा भाग लिएका दलका कार्यकर्ताहरु भोलिका दिनमा विप्लवमाथि जाइनलाग्लान् भन्न सकिन्न । हिंसाका विरूद्ध प्रतिहिंसा भए भोलि विप्लवको बचेखुचेको राजनीति धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
युनाइटेड सिमेन्ट्सको जानकारी मूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौंका ११ गरीब परिवारले पाए किराना पसल
सूनपाद्वारा सडक विस्तार, आजबाट संरचना भत्काउन शुरु
दुई अध्यक्ष भएर संसारकै नमूना तरिकाले काम गरेका छौँ : प्रम ओली
१ पुस, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली यही पुस २ गते बिहान संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोसँग पुस ३ गते वासिङ्टन डिसीमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग ९युएसएआइडी० र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनका उच्च अधिकारीसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने
श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता : मन्त्री थापा
१ पुस, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिता रहेको बताइन् । स्वतन्त्रता अभियान नेपालले आज आयोजना गरेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकविरुद्ध हुने हिंसा विषयक राष्ट्रिय विचार गोष्ठीमा मन्त्री थापाले यस क्षेत्रमा हुने समस्या समाधान गर्न सरकाले धेरै ऐन कानून निर्माण गरिसकेको बताइन् ।निर्माण भएका ऐन कानूनलाई प्रभावकारी
कांग्रेस महासमिति बैठक : भित्र बन्दसत्र, बाहिर हिन्दूराष्ट्रका लागि हस्ताक्षर संकलन
१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको बन्द सत्र जारी छ । बन्द सत्रमा महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले ‘साङ्गठनिक प्रतिवेदन’ कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले ‘लेखा प्रतिवेदन’ र सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक प्रस्ताव’ पेश गर्नुभएको छ । तीन वटै प्रस्तावमाथि आज छलफल हुनेछ । प्रतिवेदनमा छलफलपछि महासमिति सदस्यले राखेका विचारका आधारमा संशोधनसहित पारित हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । विधान संशोधनको
१ पुस, नोहपेन्ह । कम्बोडियाका भन्सार अधिकारीहरुले अफ्रिकी मुलुक मोजाम्बिकबाट पठाइएको कन्टेनरभित्र लुकाएको अवस्थामा ३ दशमलब २ टन भन्दा बढी हात्तीको दाह्रा बरामद भएको जनाएका छन् । कम्बोडियामा बरामद गरिएको अफ्रिकी हात्तीको दाह्रा आजसम्मकै यो सबैभन्दा बढी हो । नोमपेन्ह स्वायत्त बन्दरगाहमा बिहीबार एक हजार २६ थान हात्तीका दाह्रा फेला परेका थिए । विगत केही समयदेखि नै कम्बोडियालाई अर्बौं डलरको वन्यजन्तुको अबैध चोरीशिकारी
काँग्रेस नेता कमलनाथले डिसेम्बर १७ मा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने
२८ मंसिर, भोपाल । भारतीय काँग्रेस पार्टीका प्रख्यात नेता कमलनाथले यही डिसेम्बर १७ मा मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । डिसेम्बर १३ मा मध्य प्रदेशको मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका कमलनाथले ‘लाल परेड ग्राउन्ड’ मा सपथ ग्रहण गर्ने समाचारमा जनाइएको छ । मध्य प्रदेशको काँग्रेस समिति (एमसीसी) का अध्यक्ष समेत रहेका कमलनाथलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बिहीबार अबेर राति घोषणा भएको थियो । हालैमात्र सो राज्यमा सम्पन्न विधान
कोइला खानीमा बाढी पस्यो, १३ जना मजदूरको मृत्यु भएको आशङ्का
२८ मंसिर, नयाँ दिल्ली । उत्तरपूर्वी भारतको मेघालय राज्यमा अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको एक कोइला खानीमा बाढी पसेपछि कम्तीमा १३ जना कामदार बेपत्ता भएका छन् । खानीको अत्यन्त साँघुरो सुरुङमा बाढी पसेका कारण कामदारहरु भित्रै थुनिएकाले उनीहरु सबैको मृत्यु हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । दर्जनौं अरु कामदारले बाढीको पानी फाल्न कोसिस गरिरहेका छन् । मेघालय राज्यमा भएको वर्षापछि बिहीबार बिहान खानीमा पानी पसेको थियो । खानीमा बेपत्ता